သူ့နေရာနဲ့သူ မို့မောက်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းက အတွင်းအလှလေးတွေပေါ်လွင်အောင် အလန်းစားလေး ချပြလိုက်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Sar
သူ့နေရာနဲ့သူ မို့မောက်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းက အတွင်းအလှလေးတွေပေါ်လွင်အောင် အလန်းစားလေး ချပြလိုက်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
By Shwe S NPosted on October 26, 2021 October 26, 2021
အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း နဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှနေ တဲ့ သူလေး က တော့ ပုရိသ တို့ အသည်း စွဲ ခေးကြီး လုလု အောင် ပါ နော်..။ သူမ ဟာ single mother တစ် ယောက် အေ နနဲ့ လည်း အောင် မြင်စွာ ရပ်တည်နေ နိုင် တဲ့ သူဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ တခြား လည်း လှသွေးကြွယ်
လုလုအောင် ဟာ သူမ ရဲ့ သမီး လေး နဲ့ အတူ အ ချိန် ပေးပြီး ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်တတ် တဲ့သူ လည်း ဖြစ်တာ ကြောင့် ပရိတ်သတ် တွေ က သူမ ကို ပိုပြီး ချစ်ခင် အားပေး နေ ကြ တာ ပါ နော် ။ အခု လတ်တလော မှာ ဆိုရင် လည်း လုလုအောင် ဟာ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ရံဖန်ရံခါ မှသာ တင် ပေးလေ့ ရှိနေ တာ ဖြစ်ပါ တယ် နော် . . ။
ပုံ တွေ သိပ်တင်လေ့ မရှိ တဲ့ လု ဟာ တင်လိုက် တိုင်း လည်း အမိုက်စားပုံ လေးတွေ ပဲ တင် တတ် တာကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ ဝန်းရံမှုကို ရရှိနေတာ ပါ။ မကြာသေးမီ က လည်း သူမ ရဲ့ facebookစာမျက်နှာ မှာ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံ လေးတွေ တငေ် ပး လာပါ တယ် ။ ကဲ ….. ပရိသတ်တွေ အ တွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် . . ။ အားလုံးပဲ ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကပ်ဆိုးကြီးတွေဘေးကနေ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် … 🙏 🙏 🙏 ။ သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like နဲ့ Shareလေးလုပ်ပေးသွားပါအုံးနော် …. ။
အမိုကျ စား ခန်ဓာကိုယျ ကောကျ ကွောငျး နဲ့ ဆှဲဆောငျ မှု ရှိရှိ လှနေ တဲ့ သူလေး က တော့ ပုရိသ တို့ အသညျး စှဲ ခေးကွီး လုလု အောငျ ပါ နျော..။ သူမ ဟာ single mother တဈ ယောကျ အေ နနဲ့ လညျး အောငျ မွငျစှာ ရပျတညျနေ နိုငျ တဲ့ သူဖွဈပွီး တဈနေ့ တခွား လညျး လှသှေးကွှယျ
လုလုအောငျ ဟာ သူမ ရဲ့ သမီး လေး နဲ့ အတူ အ ခြိနျ ပေးပွီး ပြျောရှငျစှာ နထေိုငျတတျ တဲ့သူ လညျး ဖွဈတာ ကွောငျ့ ပရိတျသတျ တှေ က သူမ ကို ပိုပွီး ခဈြခငျ အားပေး နေ ကွ တာ ပါ နျော ။ အခု လတျတလော မှာ ဆိုရငျ လညျး လုလုအောငျ ဟာ သူမ ရဲ့ ပုံရိပျလေး တှေ ကို ရံဖနျရံခါ မှသာ တငျ ပေးလေ့ ရှိနေ တာ ဖွဈပါ တယျ နျော . . ။
ပုံ တှေ သိပျတငျလေ့ မရှိ တဲ့ လု ဟာ တငျလိုကျ တိုငျး လညျး အမိုကျစားပုံ လေးတှေ ပဲ တငျ တတျ တာကွောငျ့ ပုရိသ တှေ ရဲ့ ဝနျးရံမှုကို ရရှိနတော ပါ။ မကွာသေးမီ က လညျး သူမ ရဲ့ facebookစာမကျြနှာ မှာ ခပျမိုကျမိုကျ ပုံ လေးတှေ တငျေ ပး လာပါ တယျ ။ ကဲ ….. ပရိသတျတှေ အ တှကျ ပွနျလညျ မြှဝပေေး လိုကျပါ တယျ နျော . . ။ အားလုံးပဲ ယခုဖွဈပျေါနတေဲ့ ကပျဆိုးကွီးတှဘေေးကနေ ကြျောလှားနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော … 🙏 🙏 🙏 ။ သဘောကနြှဈသကျတယျဆိုရငျ Like နဲ့ Shareလေးလုပျပေးသှားပါအုံးနျော …. ။
Previous post သူမရဲ့ မလျှော်ရသေးတဲ့ အတွင်းခံတွေကို အမျိုးသားပရိတ်ကြီးအတွက် ရောင်းချပေးသွားအုံးမယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ
Next post ဖွေးဥနေတဲ့ အတွင်း သားလေးတွေကြောင့် အသက်ရှူ မှား သွားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ပိုနေ တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ ပုံလေးတွေ